फेसबुक कम्पनीका सीईओ मार्क जुकरबर्गको कूल सम्पत्ति एक अर्ब ७ करोड डलर रहेको छ । संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्तिको चौथो स्थानमा आउने जुकरबर्गले आफू कार्यरत फेसबुक कम्पनीबाट चाहिँ सबैभन्दा कम तलब पाउँदछन् ।
१. डाटा वैज्ञानिक : एक लाख १० हजार डलरदेखि २ लाख १६ हजार डलरसम्म२. सफ्टवेयर इन्जिनियर : एक लाख १० हजार डलरदेखि २ लाख ८० हजार डलरसम्म३. डाटा इन्जिनियर : एक लाख १० हजार डलरदेखि १ लाख ९५ हजार डलरसम्म४. अनुसन्धान वैज्ञानिक : एक लाख ३५ हजार डलरदेखि २ लाख ५० हजार डलरसम्म५. इन्जिनियरिङ म्यानेजर : एक लाख ७१ हजार डलरदेखि २ लाख ८० हजार डलरसम्म ६. टेक्निकल प्रोग्राम म्यानेजर : एक लाख ११ हजार डलरदेखि २ लाख २५ हजार डलरसम्म७. प्रोडक्सन इन्जिनियर : एक लाख १० हजार डलरदेखि २ लाख २१ हजार डलरसम्म
८. इन्जिनियरिङ निर्देशक : दुई लाख ८४ हजार डलरदेखि ३ लाख ४५ हजार डलरसम्म ९. एनालिटिक्स प्रमुख : एक लाख ५५ हजार डलर १०. प्रडक्सन डिजाइनर : एक लाख ५ हजार डलरदेखि १ लाख ९९ हजार डलरसम्म ११. फ्रन्ट एन्ड इन्जिनियर : एक लाख १० हजार डलरदेखि २ लाख २५ हजार डलरसम्म १२. प्रडक्ट म्यानेजर : एक लाख १० हजार डलरदेखि २ लाख ४० हजार डलरसम्म १३. सेक्योरिटी इन्जिनियर : एक लाख १५ हजार डलरदेखि २ लाख १५ हजार डलरसम्म ।
ASIC & FPGA Engineer: $145,000 to $205,000,Electrical engineer: $125,000 to $205,000,Optical scientist: $140,000 to $180,359,Hardware engineer: $155,000 to $208,192,Network engineer: $78,499 to $180,000
Content strategist: $115,000 to $180,000,Copywriter: $186,376,Policy programs manager: $150,000,SMB creative specialist: $112,172,VP, Global Affairs & Communications: $655,500,UX researcher: $120,000 to $162,000
Product marketing manager: $110,779 to $205,680,Finance manager: $145,000 to $180,000,HR business partner: $153,000 to $220,500,Business analyst: $130,000 to $201,676Events manager: $143,343,Security,analyst: $145,089,Lead,counsel: $210,000
अमेरिकी सेनाको गाडीसँग कार ठोकिदा कोरियामा ४ जनाको मृ’त्यु !